Ny bateria OnePlus 6 dia mandeha haingana haingana | Androidsis
Eder Ferreño | | bateria, Finday, OnePlus
Raha roa herinandro lasa izay dia olana teo amin'ny bootloader, izao dia anjaran'ny olana vaovao amin'ny OnePlus 6. Ny haavo farany an'ny marika sinoa dia nohavaozina tato ho ato ho OxygenOS 5.1.8. Ity no kinova vaovao an'ny sosona fanaingoana ho an'ny maodelin'ny orinasa. Saingy toa tsy mandeha tsara amin'ny farany ny fanavaozana. Satria misy olana amin'ny baterinao.
Ireo mpampiasa manana OnePlus 6 izay nanatsara ny OxygenOS 5.1.8 dia miaina olana manelingelina. Ary moa ve ny batterin'ilay fitaovana dia mandeha haingana be kokoa noho ny mahazatra. Zavatra mitranga aorian'ny nahazoana ny fanavaozana.
Ny ampahany tsara dia Toa tsy fahombiazana io fa misy fiatraikany amin'ny mpampiasa rehetra ambony. Saingy misy mpampiasa maro izay voakasik'ity hadisoana ity. Izy rehetra dia nanomboka nijaly tamin'ny olana taorian'ny fanavaozana.
Tsy dia misy mistery loatra amin'izany. Mazava ny olana, Ny baterian'ny OnePlus 6 dia mivoaka haingana dia haingana. Midina haingana be kokoa noho ny mahazatra izy io. Zavatra iray izay niteraka ahiahy sy fahasosorana teo amin'ireo mpampiasa tamin'ny faran'ny marika marika sinoa.
Amin'izao fotoana izao ny marika mihitsy no tsy namaly ireo fiampangana ireo. Na dia tena fiampangana azy ireo aza izy ireo, satria maro ireo mpampiasa manana OnePlus 6 voakasik'izany. Saingy manantena izahay fa hilaza zavatra izy ireo ary hanaiky ny tsy fahombiazana atsy ho atsy. Tsy tokony haharitra ela vao hahalala bebe kokoa.
Mandritra izany fotoana izany, inonaMiandrasa vahaolana havoaka ho an'ireo mpampiasa manana OnePlus 6 izay no voadona tamin'ny tsy fahombiazana. Amin'izao fotoana izao dia mbola tsy fantatra ny isan'ny mpampiasa izay voakasik'ity bateria ity izay mandefa haingana kokoa, fa azo inoana fa hitombo bebe kokoa izy io tato ho ato.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Ny fanavaozana farany dia manome ny olan'ny bateria amin'ny OnePlus 6
Ankoatry ny fisintomana haingana kokoa noho ny mahazatra dia mafana be izy io na amin'ny dingan'ny famahanana ary rehefa ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra miaraka amin'ny efijery.
Luis T. dia hoy izy:
Omaly aho dia nanavao ny Android 10 sy ny Oxigen OS 10.3.0 an'ny One plus 6 ary ny batterie overheat ary nahavita 60% haingana kokoa noho ny mahazatra. Azafady azafady ny fanampianao hanodina izany fanavaozana izany. Misaotra anao
Valiny tamin'i Luis T.
Samsung dia tsy hahatratra ny tanjon'ny varotra ho an'ny taona 2018